The MYAWADY Daily: January 2018
လူရည်လည်တဲ့လူတွေ၊ ထက်မြက်တဲ့လူတွေမှာ သူများနဲ့မတူ၊ တစ်မူထူးခြားတဲ့ သဘောထားအမြင်တွေ၊ အယူအဆတွေရှိကြသလို နည်းနည်းထူးဆန်းပြီး နည်းနည်းလဲ ကြောင်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အကြိုက်တွေ၊မကြိုက်တွေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သင်နဲ့ ဘယ်လောက် တိုက်ဆိုင်သလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။
လည်ဝယ်ထက်မြက်တဲ့ သူတွေဟာ အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ အခြေအနေ အသစ်တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိအောင် နေတတ်ကြပါတယ်။ ရုပ်လုံးပေါ် မဟုတ်တဲ့ သဘောတရား အဆင့်မှာပဲရှိတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူ့အသိပညာနဲ့နိုင်နင်း စွာကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အရည်အချင်းမျိုးတွေရှိဖို့ ထိုးထွင်းဥာဏ်၊ သင်ယူနိုင်စွမ်း၊ မှတ်ဥာဏ်၊ ဆင်ခြင်တုံတရား၊ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းစတဲ့ အခြေခံ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ တွေလိုပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေရဲ့ အလုပ်စားပွဲဟာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မနေဘဲ အမြဲရှုပ်ပွနေလေ့ ရှိပါတယ်။
လူဆိုတာ ညအိပ်တဲ့အမျိုးပါ။ ပြီးတော့ ညဆိုတာ အမှောင်အမိုက်နဲ့ဆိုတော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ အန္တရာယ်ကိုအန်တုပြီး အိပ်ချိန်မှာမအိပ်ဘဲ အလုပ်လုပ်နေတာကိုက စွန့်စားရတဲ့ အရသာတစ်မျိုးဆိုတာ ကျောက်ခေတ်ကတည်းက ကမ္ဘာဦးလူသားတွေ ကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။လည်ဝယ် ထက်မြက်သူတွေလဲ စောစောအိပ်တယ် တော့မရှိပါဘူး။ တစ်ညလုံး ဂိမ်းကစား၊ ဘောပွဲကြည့်တာမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုးချုပ်လေ၊ ကြည်လင် လန်းဆန်းလေ၊ အလုပ်ပိုလုပ်လေပါ။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က နေတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဆဲတယ်ဆိုတာ ဥာဏ်ရည်နိမ့်ကျတဲ့ သဘောပါ။ အခြေအနေ တစ်ခုကြောင့် ခံစားလိုက်ရတာကိုပုံဖော်ဖို့ စကားလုံးရွေးမရရင် လူတွေကဆဲလေ့ ရှိပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့အသံနဲ့ ဆဲထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် ရင်ထဲကမကျေနပ်မှုတွေကို ဖွင့်ထုတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ဝယ်ထက်မြက်သူတွေကလဲ အလိုမကျရင် ဆဲပါတယ်။ ဆဲတာမှ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဆဲတာပါ။ လိင်စကားလုံးတွေကို ပဲသုံးတာမဟုတ်ဘဲ လူတစ်ဖက်သား သေးကျုံ့လွင့်ပြယ်သွားအောင် ထိထိရောက်ရောက် ဆဲတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်များရဲ့ အလိုအရ စကားလုံးကြွယ်ဝစွာ နဲ့ဆဲတတ်ခြင်းဟာလဲ လည်ဝယ်ထက်မြက်သူတွေရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ပဲလို့ သိရပါတယ်။
ရေအေးနဲ့ ရေချိုးတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။ စိတ်ကိုကြည်လင်စေပြီး မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒီတော့ ဦးနှောက်ရဲ့ အရည်အသွေးလဲ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာတာပေါ့။ လည်ဝယ်ထက်မြက်သူ တွေကျတော့ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် အေးနေတဲ့ဆောင်းတွင်း တွေမှာပါ ရေအေးနဲ့ချိုးဖို့ပဲ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ စွန့်စားရတာ၊ သူများမလုပ်ရဲတာ လုပ်ရတာကို ဝါသနာပါကြ သူတွေပေါ့။ အစာဝါးစားသံကို မခံနိုင်ကြဘူး၊ စိတ်ဆိုးကြပါတယ်။ သူတို့ဘေးနား တစ်ခုခုကို တကျွတ်ကျွတ်ဝါးတာ။ နေကြာစေ့ထိုင်စားတာ၊ ပီကေဝါးတာ အစရှိတာတွေကို မခံနိုင်ကြပါဘူး။ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုများအရ ဖန်တီးမှု စွမ်းရည် မြင့်မားသူတို့ဟာ အရာရာအားလုံးကို စူးစူးစိုက်စိုက်အာရုံ ထားကြလေတော့ အသံသေးသေးမွှားမွှား လေးတွေကြားရင်ကို မနေတတ်ဘဲ အာရုံက အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်တဲ့အတွက် အဲဒီလိုတကျွတ်ကျွတ်၊ တဂျစ်ဂျစ်အသံ တွေကြားရင် လုံးဝမနေနိုင်ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူတို့ တောင်ခြစ်မြောက်ခြစ် ရေးနေတတ်ကြပါတယ်။
လုပ်စရာကိစ္စတွေကို To-do List ချရေးတတ်ကြတယ်။ အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲရင် စာရွက်ခဲတံနဲ့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ်လုပ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဘာမှအာရုံမစိုက်ဘဲ ခေါင်းထဲပေါ်လာတာကို ချချရေးတာဟာ မှတ်ဥာဏ်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဦးနှောက်ဟာ တစ်နေ့တာ ကျက်မှတ်ထားတာရဲ့ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြန်မေ့လျော့ သွားလေ့ရှိပါတယ်။ တောင်ခြစ်မြောက်ခြစ် သမားတွေကျတော့ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှတ်မိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အရည်အချင်းမရှိတဲ့ လူတွေက သူတို့ကိုသူတို့ ပြန်ဝေဖန်ဖို့လဲ အရည်အချင်းမရှိကြပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်တာမှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဝေဖန် သုံးသပ်နိုင်သူတွေဟာ လည်ဝယ်ထက်မြက်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သူတို့စိတ်ကူးယဉ်ကြပါတယ်။ အဆိုးကိုပဲတွေးနေမယ်၊ စိတ်မချမ်းသာစရာတွေကိုပဲ စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်ဟာ တုံးသည်ထက်တုံးသွား လေ့ရှိပါတယ်။ ပျော်စရာတွေ၊ ကြည်နူးစရာတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ဟာ ပြန်လည်အားပြည့် လန်းဆန်း လာလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ယောက်ထဲ စကားပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ရူးသွပ်မှုလို့မမြင်ပါနဲ့။ စဉ်းစားတွေးတောနိုင်စွမ်း မြင့်မားတာ၊ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းမွန်တာ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်အား ကောင်းတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ လည်ဝယ်ထက်မြက်သူတွေရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အမူအကျင့်တွေကို လေ့လာရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မန္တလေးဈေးချိုရှိ စားသောက်ကုန် အရောင်းဆိုင်များကို ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေး ကင်းစင်သော ဆိုင်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမည်
မန္တလေးဈေးချိုအတွင်း၌ ရောင်းချနေသည့် စားသောက်ကုန် အရောင်းဆိုင်များကို ခွင့်မပြုဓာတု ဆိုးဆေးကင်းစင်သော ဆိုင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစားအေသာက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနခွဲ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
စားသောက်ကုန် အရောင်းဆိုင်များကို ခွင့်မပြုဓာတု ဆိုးဆေးကင်းစင်သောဆိုင် အဖြစ်လက်မှတ်ပေးခြင်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ဈေးချိုတော်ကို စတင်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိဈေးများကို ယခုကဲ့သို့ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''အခု ထုတ်ပေးထားတာက ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဘယ်ပြည်နယ်၊ ဘယ်မြို့မှာမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ သေးပါဘူး။ မန္တလေးဈေးချိုကို ပထမဦးဆုံး ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးအနေနဲ့ ဆိုင်ပေါင်း ၁ဝဝ ကိုထုတ်ပေးသွားမှာ ပါ။ အခုမန္တလေး ဈေးချိုဟာဆိုရင် ဓာတုဆိုးဆေး လုံးဝကင်းစင်သွားပါပြီ။ တစ်လကို နှစ်ကြိမ်လောက် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ပဲပြား၊ ငါးပိ၊ မျှစ် ဒီအစားအစားတွေကို အဓိကထားပြီး စစ်ဆေးပါတယ်'' ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
မန္တလေးဈေးချိုတော် အတွင်း၌ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစ၍ ဆိုးဆေးများဆိုး၍ အစားအသောက်များ ရောင်းချခြင်းသည် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာပြီး နိုဝင်ဘာလအတွင်း စစ်ဆေးချက်များအရ ၁ဝ ခိုင်နှုန်းခန့်တွေ့ရှိ ခဲ့သော်လည်း ဒီဇင်ဘာလမှ၍ ဆိုးဆေးဆိုး၍ ရောင်းချသည့် အစားအစာများ လုံးဝကင်း စင်သွားကြောင်း၊ ယခုထုတ်ပေးမည့် လက်မှတ်များသည် ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေး ကင်းစင်သောဆိုင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ဒီလက်မှတ်တွေကို FDA နဲ့မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတို့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ဆိုင်တွေကို ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ FDA ကနေပြီးတော့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် စစ်ဆေးပြီးမှ လုံးဝဆိုးဆေး ကင်းစင်မှထုတ်ပေးမှာပါ။ ပြီးတော့ ဒီလက်မှတ်ထုတ်ပေး ပြီးတော့ FDA ကနေပြီး အချိန်မရွေးဝင်စစ်လို့ ဆိုးဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလက်မှတ်ကို ပြန်လည်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်''ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောပြ၍ သိရသည်။
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ရေကြောင်းကျပ်တည်းမည့် နေရာ ၂၅ နေရာကျေးရွာခုနစ်ရွာတွင် ဝါးနွေရေကာ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လျာထား
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ယခုနှစ်ရေကျချိန်တွင် ရေကြောင်းကျပ်တည်းမည့် နေရာ ၂၅ နေရာရှိသော်လည်း သွားလာအသုံးပြုမှု များသည့် စဉ့်ကူ-မန္တလေး-ညောင်ဦးကြား ကျေးရွာခုနစ်ရွာတွင် ဝါးနွေရေကာ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လျာထားကြောင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနဒေသ-၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ ရေနည်းချိန် ကာလဖြစ်သည့်အပြင် သင်္ဘောများ သွားလာရာတွင်လည်း ရေကြောင်း ကျပ်တည်းမှုများကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း၊ ဧရာဝတီမြစ် အတွင်း၌သွားလာ နေသည့် ခရီးသည်တင် သင်္ဘောများအပါအဝင် ကုန်တင်သင်္ဘောများအနေဖြင့် သတိပြုသွားလာရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း၌ ရေနည်းချိန် ကာလတွင် သွားလာရခက်ခဲသည့် နေရာ ၂၅ နေရာခန့် ရှိသော်လည်း မန္တလေးဆိပ်ကမ်းမှ အဓိကသွားလာ အသုံးပြုနေသည့် ရေလမ်းကြောင်းများဖြစ်သည့် စဉ့်ကူမန္တလေး-ညောင်ဦး ရေလမ်းကြောင်းရှိ ကျေးရွာခုနစ်ရွာ၌ ဝါးနွေရေကာဖြင့် ရေကြောင်းကျပ်တည်းမှု များကိုယာယီ ဖြေရှင်း ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလက်ရှိ မန္တလေးမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေမှာ ၃၈ဝ စင်တီမီတာသာရှိပြီး အနည်းဆုံးရေအမှတ် ၃၆ဝ စင်တီမီတာထိ ရောက်ရှိရန် အနည်းငယ်သာ လိုအပ်တော့သည့်အတွက် လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ ရေကြောင်း ကျပ်တည်းမှုများ စတင်ဖြစ်ပေါ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရေကြောင်းကျပ်တည်းမည့် နေရာ ၂၅ နေရာခန့်ရှိမည်ဟု တွက်ချက်ထားပြီး ၎င်းနေရာထဲမှ ကျပ်တည်းမှု အဆိုးဆုံး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ကြာဥယျာဉ်ကျေးရွာ၊ ရေလယ်ကျွန်းကျေးရွာ၊ ရှမ်းကလေးကျွန်းကျေးရွာ၊ နှောက်ချေးကျွန်းကျေးရွာ၊ သုံးလင့်ကျေးရွာ၊ ရွေပေါက်ပင်ကျေးရွာနှင့် လေးလံကျွန်း ကျေးရွာတို့တွင် ဝါးနွေရေကာလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပေးသွားရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ရေကြောင်း ကျပ်တည်းသည့် နေရာများကို ရေအနက်ပိုမိုရရှိ စေရေးအတွက် ရေပြန့်ကျယ်တွင် တစ်ပြေးညီ စီးဆင်းနေသည့် ရေကိုကတော့ပုံစံစီး ဆင်းနိုင်ရန်ဝါးတိုင်၊ ဝါးကပ်များဖြင့် အဟန့်အတား လုပ်ပေးကာရေစီး၊ရေလာမှာစောင်း၍ တစ်နေရာတည်းတွင် စီးဆင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့စီးဆင်းပြီး မြစ်ကြမ်းပြင်ရှိသဲများကိုပါ ရေတိုက်စားကာ ယခင်ကသုံးပေအနက် ရှိသည့်နေရာမှာ ရေအနက်ငါးပေ ထိရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းဝါးနွေရေကာများကို ရေစီးရေလာချိန်ပြီး အလျား၊အနံ တွက်ချက်ကာ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြို့ကွက်သစ် ဖော်ဆောင်ရေး မြေဧက ၁ဝဝ စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိရာ အိမ်ငှားဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်သူများကို ဦးစားပေးနေရာ ချထားမည်
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့၌ မြို့ကွက်သစ် ဖော်ဆောင်ရေး မြေဧက ၁ဝဝ စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိရာ အိမ်ငှားဘဝဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်သူများကို အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် ဦးစားပေးမဲနှိုက် နေရာချထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ သိရသည်။
အဆိုပါမြေဧက ၁ဝဝ အတွက်ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးဖြစ်၍ မြေကွက်ဖွင့်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဟားခါးမြို့တွင် နှစ်ရှည်လများနေထိုင်၍ ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်မရှိဘဲ အိမ်ငှားအနေဖြင့် နေထိုင်သူများကို ပထမဦးစားပေး ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ကွက်လျှင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှင့် နှစ်သိန်းခန့် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရရှိလာမည့် ငွေကြေးများကိုလည်း မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်မည့်လမ်း၊ မြောင်းနှင့် အခြားလိုအပ်မည့် နေရာများ၌ အသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေကွက်မရှိသူများကို ကိုယ့်ခြံကိုယ့်ဝင်း ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အဓိကလုပ်ဆောင် ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကွက်များ ရိုက်ပြီးဖြစ်၍ လပိုင်းအတွင်း နေရာချမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ယခုအခါ စည်ပင်ဧရိယာ ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် ဟိုတယ်နှင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိုသူများကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဟားခါး မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
"ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီမြေဧက ၁ဝဝ ကွက်သစ်မှာ ဟားခါးမြို့ပေါ်မှာ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိကြဘဲ မုဆိုးမ ဦးဆောင်တဲ့ မိသားစုတွေ၊ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေ၊ ဆင်းရဲတဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေ အပါအဝင် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်း မိသားစုတွေ၊ သင်းအုပ်ဆရာတော်တွေကို မြို့မိမြို့ဖတွေရဲ့ သဘောထားညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ရယူပြီးတော့ နေရာချထား ပေးနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်"ဟု ဟားခါးမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆက်လက် ပြောပြသည်။
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအနေဖြင့် မြို့ပြစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲလျက်ရှိရာ ဟားခါး၊ ဖလမ်း၊ ပလက်ဝဟူ၍ မြို့သုံးမြို့ကို မြို့သစ်စီမံကိန်း၊မြို့ပြ စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန်အတွက် အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ မြေဧက ၁ဝဝ မြို့သစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပြီးပါက နောက်ထပ်မြေဧက ၁ဝဝကို ထပ်မံဖော်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်းမြေကွက်ပေါင်း ထောင်ဂဏန်းကျော်ထိ နေရာချထားပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပန်ကွဲကျေးရွာအနီးရှိ အဘယရာဇမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး မူလဌာပနာတော်၊ အလယ်ဌာပနာတော်နှင့် အထက်ဌာပနာ တော်သွင်းမဟာမင်္ဂလာနှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာ တင်အခမ်းအနားကျင်းပ
တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများနှင့် အလှူရှင်များစုပေါင်း လှူဒါန်းသည့် ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပန်ကွဲကျေးရွာအနီးရှိ အဘယရာဇမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုတွေ့ရစဉ်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှနှင့် အခမ်းအနားတက်ရောက် လာကြသူမူများ ဒေဝါဝင်း၊ ရာဇာဝင်းများခြံရံပြီး ဌာပနာတော်များအား ပင့်ဆောင်၍ ဗုဓ္ဓရုပ်ပွားတော် မြတ်ကြီးအား လက်ယာရစ်လှည့်လည်ပင့်ဆောင်ပူဇော်စဉ်။
ကျိုင်းယင်း ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တခေမာစာရထံ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှတို့ သဗ္ဗညုဘုရားရှင်အား ရည်မှန်း၍ မူလဌာပနာတော်၊ အလယ်ဌာပနာတော်နှင့် အထက်ဌာပနာတော်များကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းစဉ်။
ဆရာတော်ထံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်းနှင့် ဇနီးတို့ဌာပနာတော်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းစဉ်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သတ်မှတ်ဌာပနာတိုက်တွင် ဌာပနာတော်များအား သွင်းလှူပူဇော်စဉ်။
ယင်းနောက် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများသည် မူဆယ်မြို့ လိုင်တိန်ခမ်းကျောင်းဆရာတော် မဟာကမ္မဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္တသုခမိန္ဒထံမှ အနုမေါဒနာ တရားနာယူပြီးလှူဒါန်းမှု အစုစုအတွက်ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အဘယရာဇမုနိဘုရားကြီး တည်ဆောက်ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် မြန်မာမှုပညာရှင် မန္တလေးယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်ပါမောက္ခ ဦးဇော်သန်းထွဋ်၊ ပန်းတမော့ပညာရှင် ဦးကျော်ကျော်လွင်နှင့် မြန်မာမှု ပညာရှင် ဦးစ၀င်းကြည်တို့အား ဂုဏ်ပြုငွေများပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။ ယင်းနောက် စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးက အဘယရာဇမုနိရုပ်ပွား တော်မြတ်ကြီး ပုံတူရုပ်ပွားတော်အား မူလဘုရားဒါယကာအရင်းဖြစ်သည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ထံပေးအပ်သည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒေ၀ါဝင်း၊ ရာဇာဝင်းများခြံရံပြီး ဌာပနာတော်များ အား ပင့်ဆောင်၍ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး အား လက်ယာရစ်လှည့်လည်ပင့်ဆောင်ကြသည်။ ထို့နောက်ဆရာတော်ကြီးများ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် သတ်မှတ်ဌာပနာတိုက်အသီးသီးတွင် ဌာပနာတော်များအားသွင်းလှူပူဇော်ကြသည်။
ယင်းနောက်ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များက အဘယရာဇမုနိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် မြတ်ကြီးအား ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင်၍ ဗုဒ္ဓါဘိသိက်သွန်းတော်မူကြသည်။ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီးတို့က အဘယရာဇမုနိဗုဒ္ဓရုပ်ပွား တော်မြတ်ကြီး မူလဌာပနာတော်၊ အလယ်ဌာပနာတော်နှင့် အထက်ဌာပနာတော်သွင်း မဟာမင်္ဂလာနှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင်အခမ်းအနား အောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် ရတနာရွှေမိုးငွေမိုးများရွာသွန်းဖြိုးကြပြီး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအား မြသပိတ်ဆွမ်းတော်၊ သစ်သီး ပန်းမန်များနှင့် ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီးများကပ်လှူပူဇော်ကြသည်။
၎င်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ကမ္ဗည်းမော်ကွန်း ကျောက်စာတိုင်၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးရေး ခေါင်းလောင်းတော်နှင့် တံခွန်တိုင်တော်တို့အား အမွှေးနံ့သာရည်များပက်ဖျန်း၍ဖွင့်လှစ်ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်း လောင်းတော်ကြီးအား ၉ ချက်တီး၍ပူဇော်သည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ဇနီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များအားနေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသည်။
ထို့အတူငြိမ်းချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းလောင်းတော်ကြီးကိုလည်း ကြေးပိဿာချိန် ၆၀၀ ဖြင့်သွန်းလောင်း၍ မေတ္တသုတ်တော်အား ရေးထွင်းပူဇော်ထားပြီး ယခုအခါ အဘယရာဇမုနိရုပ်ပွားတော် မြတ်ကြီးအား ကြည်ညို သပ္ပါယ်စွာဖြင့် ဘုရားဖူး ပြည်သူများလာရောက်ဖူး မြော်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
KIA insurgents cut off Myitkyina-Sumprabum-Putao road, abduct road workers
Photo shows destructive act of KIA insurgents who ordered workers to dig hole on the road near Ka Wa Pan Village.
Kachin Independence Army (KIA) insurgents destroyed parts of the motor road linking Myitkyina, Sumprabum and Putao, and abducted road workers on 29 January.
KIA insurgents arrived at the place of workers hired by Manpyi Tagun Co to repair the road section, around4am on 29 January, and coerced the backhoe driver (whose name is still under scrutiny) to dig 80-ft long, 18-ft deep, and around 12-ft wide hole near the old Htein Paing village at mile post No. 9/7, and 10-ft long, 18-ft deep and 20-ft wide hole near the old Nam Kham Kha village at the mile post No. 86, and 50-ft long, 18-ft deep, and 8-ft wide hole near the old Ka Wa Pan village at the mile post No. 81 in order to cut off the route. They also detained workers
and vehicles of Manpyi Tagun there and confiscated their mobile phones.
The road isahard gravel road and as there are only three feet wide space left on it because of the holes, it is currently unserviceable for cars, and only motorbikes and people can pass it through. Meanwhile, KIA insurgents are deployed on the road to prevent roadworks from being continued. KIA insurgents have continued destructive acts that hinder the development of the region, and Tatmadaw columns are conducting clearance operations in and around the area.
Photo shows magnificient view of Abhayarazamuni Buddha Image.
Senior General Min Aung Hlaing and wife Daw Kyu Kyu Hla sprinkle scented water on stone inscriptions.
Senior General Min Aung Hlaing and party take Nine Precepts from members of the Sangha.
General Maung Maung Kyaw and wife offer religious objects to members of the Sangha.
31 1 2018 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
31 1 2018 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
သီတဂူဝိပဿနာ တက္ကသိုလ်တွင်ထားရှိမည့် ခေတ်အဆက်ဆက်က ခြင်္သေ့ရုပ်တုများကို သီတဂူဆရာတော်ကြီးမွေးနေ့အမီ အပြီးထုလုပ်သွားမည်
စစ်ကိုင်းမြို့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီတဂူဝိပဿနာ တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက်မှ ခြသေ့င်္ရုပ်တုပုံစံတူများ ထားရှိရန်အတွက် ကျန်ရှိနေသည့် ခေတ်အဆက်ဆက်က ခြင်္သေ့ရုပ်တုများကို လာမည့် တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် သီတဂူဆရာတော်ကြီး (၈၁)နှစ် မွေးနေ့အမီ အပြီးထုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ယူပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဇေယျာရပ်ကွက်ရှိ အိမ်မွန်ပန်းပုစတူဒီယိုမှ ပန်းပု ပညာရှင် ဆရာဦးစိုးအောင်က ပြောပြသည်။
သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဥာဏိဿရ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီတဂူဝိပဿနာတက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက်က ခြသေ့င်္ရုပ်တုများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ခြသေ့င်္ရုပ်တုပုံများအတိုင်း စုစုပေါင်း ခြသေ့င်္ရုပ်တု ၃၆ခု ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ထားရှိရန်အတွက် စစ်ကိုင်းမြို့ ဇေယျာရပ်ကွက်ရှိ အိမ်မွန်ပန်းပု စတူဒီယိုကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက်က ခြသေ့င်္ရုပ်တု ၁၈ ခုထုလုပ်ပေးရန် သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး က မှာယူခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ခေတ်အဆက်ဆက် ခြသေ့င်္ရုပ်တု ၁၄ ခု ထုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ကျန်ရှိနေသည့် ခြသေ့င်္ ရုပ်တုများကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး မွေးနေ့အမီအပြီး ထုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင် ခေတ်ရှစ်ခေတ်ပါ။ ပျူ၊ ပုဂံ၊ ပင်းယ၊ ပထမအင်းဝ၊ ဒုတိယအင်းဝ(ခေါ်) ညောင်ရမ်း၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦး၊ အမရပူရ၊ ရတနာပုံ အဲဒီခေတ်တွေက ခြင်္သေ့ရုပ်တုတွေ ထုလုပ်ရတယ်။ တစ်ခေတ်ကို ရုပ်တုနှစ်ခုထုလုပ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အသောကခေတ် အသောက ကျောက်တိုင်ကလိုပါ။ အသောက ကျောက်တိုင်က ခြင်္သေ့ရုပ်တုက တစ်ခြမ်းပဲ လုပ်ထားတာ။ ခုဟာကရုပ်လုံးလုပ်ရမှာပါ။ အဲဒီလို ခေတ်တွေက ခြင်္သေ့ရုပ်တု တွေထုလုပ်ဖို့အတွက် ကုန်းဘောင်ခေတ် ဦးဆိုကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားတွေ လိုက်ရှာရတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦး ခြသေ့င်္ဒီဇိုင်းက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခေတ်ထဲမှာကို ပန်းပုဆရာတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ လက်ရာကမတူပါဘူး။ အဲဒီထဲကမှ (မြန်မာမှုဗိသုကာပညာရှင်) ဆရာ ဦးဝင်းမောင်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဒီဇိုင်းရွေးတာပါ"ဟု တာဝန်ယူပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဇေယျာရပ်ကွက်ရှိ အိမ်မွန်ပန်းပု စတူဒီယိုမှ ပန်းပုပညာရှင်ဆရာ ဦးစိုးအောင်က ပြောပြ၍ သိရသည်။
တိုင်းပြည်က အားထားရပြီး ပြည်သူများက အားကိုးရသည့် တပ်မတော်ဖြစ်စေရန်အတွက် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှု ပြည့်ဝသည့် တပ်မတော်သားများ လေ့ကျင့်မွေးထုတ် ပေးလျက်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ကျိုင်းတုံတပ်နယ်ရှိ နယ်မြေခံတပ်မတော်တန်းမြင့် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ နည်းပြအရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် သင်တန်းသားများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ကျိုင်းတုံတပ်နယ်ရှိ နယ်မြေခံတပ်မတော်တန်းမြင့် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ နည်းပြအရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် သင်တန်းသားများအား ရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံ နှုတ်ဆက်စဉ်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ပြည့်ဝ၍ တိုက်ပွဲတစ်ရာနိုင်ပွဲ တစ်ရာတိုက်နိုင်ပြီး စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက် နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်မှုနှင့် စစ်ပညာများကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ခေတ်မီ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ပြည်သူများအတွက် အသက်ကိုပဓာနမထားဘဲ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ခိုက်မှု များကြောင့် တိုက်ပွဲများတွင်အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ စစ်ကိုနိုင်အောင် တိုက်နိုင် မှသာမိမိတို့ အပေါ်ပြည်သူများမှ အားကိုးယုံကြည်မည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ကျိုင်းတုံတပ်နယ်ရှိနယ်မြေခံ တပ်မတော်တန်းမြင့် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ နည်းပြအရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် သင်တန်းသားများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားရာတွင်ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ တြိဂံဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ နယ်မြေခံတပ်မတော် တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ နည်းပြအရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် သင်တန်းသားစစ်သည်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်မတော်သည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍ ယနေ့အချိန်အထိ နိုင်ငံတော်၏ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို မယိမ်းယိုင်အောင် ထိန်းသိမ်း ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်၏တာဝန်များကို လွှဲပြောင်းရယူချိန်မှစ၍ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ပေါ်လျှောက်လှမ်းရန် အတွက်ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးယခုအခါ ပြည်သူများမှရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်း လျက်ရှိကြောင်း ၊ပြည်သူများလိုလားသည့် ဒီမိုကရေစီရရှိစေရန် အတွက်ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်များ ရရှိအောင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကာ နိုင်ငံတော်တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ဖက်ကလည်း ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် တပ်မတော်၏ တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါတွင်ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်နှင့် သမားရိုးကျစစ်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက်တပ်မတော်ကို အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ဆောင်ရွက်၍ခေတ်မီ တပ်မတော် Standard Army တစ်ရပ်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်တွင် အင်မတန်ဂုဏ်ယူ စရာကောင်းသည့် တပ်မတော်အစဉ်အလာ ကောင်းဖြစ်သော အမိန့်နာခံမှုနှင့် စစ်စည်းကမ်းကောင်းမွန်မှု ဆိုသည့်အလေ့အကျင့် ကောင်းတစ်ခုရှိပြီး အထက်မှပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို လက်အောက်မှ ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ကြကြောင်း၊ အဆိုပါအချက်အားအခြေခံပြီး တပ်မတော်အား အဆင့်ဆင့်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်တိုးတက် ခိုင်မာအောင်ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် လိုကြောင်း၊ တိုးမြင့်လာသည့် ကုန်ဈေးနှုန်းများအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ထိန်းညှိနိုင်ရန်နှင့် တပ်မိသားစုဝင်များ စားရေးတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် တပ်မတော်မှ တပ်ပိုင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်၍ သက်သာသောဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် ၀င်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ ညီမျှအောင်ကြိုးစားသုံးစွဲရန်လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်၏လေ့ကျင့်ရေး ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရမည်၊ ကျွမ်းကျင်ရမည်၊ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိရမည်ဆိုသည့်အတိုင်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသည့် မူးယစ်သေစာသောက်စားမှုများ ရှောင်ကျဉ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုအလိုမလိုက်ဘဲ အသုံးနှင့်အဖြုန်းကိုသိရှိပြီး ခြိုးခြံချွေတာရန်လိုကြောင်းမှာကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး မိမိတို့တပ်မတော်အားခေတ်မီတပ်မတော် Standard Army တည်ဆောက်ရေးတွင် အတတ်ပညာသည် အရေးကြီး ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တပ်မတော်သားများပညာရည်မြင့်မားရေးအတွက် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး တပ်မတော်သားမိသားစု ၀င်များပညာရည်မြင့်မားရေးအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့အတူ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်မှုထမ်းဆဲတပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များသာမကစစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများကိုပါ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့တစ်ဦးချင်းကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန်လို အပ်ပြီး ကြံ့ခိုင်မှုရှိရန်အတွက်အမြဲလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမှာကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်သားများတစ်ဦးချင်း အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုရှိစေရန်အတွက် သင်တန်းကျောင်းများမှ စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင် ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ နည်းပြများကလည်းသင်ခန်းစာကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်ဖြစ်သလို သင်တန်းသားများကလည်း သင်တန်းကျောင်းမှ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တတ်ကျွမ်းစေရန်သင်ယူသွားရန်လိုကြောင်း၊ သင်တန်း ပြီးဆုံး၍ မိမိတို့တပ်သို့ပြန်ရောက်လျင် သင်တန်းကျောင်းမှသင်ယူခဲ့သည့် အတတ်ပညာများ ကိုထိရောက်စွာအသုံးချရန် လိုအပ်ကြောင်းမှာကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သင်တန်းကျောင်းအတွက် သုတ၊ ရသ စာအုပ်၊ စာစောင်များပေးအပ်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလက်ခံရယူသည်။ယင်းနောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်းက စားသောက်ဖွယ်ရာ များအား လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်က အားကစားပစ္စည်းများအား လည်းကောင်း အသီးသီးပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သည် တက်ရောက်လာကြသည့်နည်းပြအရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် သင်တန်းသားများအား ရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံနှုတ်ဆက် ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် စွမ်ခမ်း (စွမ်တောင်း) စေတီတော်မြတ်ကြီး လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ခြင်း အောင်ပွဲမင်္ဂလာ ကုသိုလ်တော်နှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပ
ကျိုင်းယင်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တခေမာစာရထံမှ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် အခမ်းအနားတက်ရောက် လာကြသူများ ငါးပါးသီလခံယူ ဆောက်တည်ကြစဉ်။
ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် စွမ်ခမ်း (စွမ်တောင်း) စေတီတော်မြတ်ကြီးကို တွေ့ရစဉ်။
ကျိုင်းယင်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ထံ သဗ္ဗ ညုဘုရားရှင်အား ရည်မှန်းထား၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှတို့က စွမ်ခမ်း(စွမ်တောင်း) စေတီတော်မြတ်ကြီးအား ဆက်ကပ်စဉ်။
စေတီတော်မြတ်ကြီးရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အား မြသပိတ်ဆွမ်းတော်၊ သစ်သီးပန်းမန်နှင့် သောက်တော်ရေချမ်းများကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှတို့ကကပ်လှူပူဇော်စဉ်။
ဆရာတော်ထံ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်နှင့် ဇနီးတို့က လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းစဉ်။
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ စွမ်ခမ်း (စွမ်တောင်း) စေတီတော်မြတ်ကြီး လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူ ပူဇော်ခြင်း အောင်ပွဲကုသိုလ်တော်နှင့် ဗုဒ္ဓဘိသေက အနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ကျိုင်းယင်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တခေမာစာရ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များ ကြွရောက်တော်မူကြပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ အလှူရှင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အခမ်းအနားတက်ရောက် လာကြသူများသည် ကျိုင်းယင်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိက ဓဇဘဒ္ဒန္တခေမာစာရထံမှ ငါးပါးသီလခံယူ ဆောက်တည်ကြပြီး ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များထံမှ ပုရိတ်တရားတော်များ နာယူကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က သဗ္ဗညုဘုရားရှင်အား ရည်မှန်းထား၍ စွမ်ခမ်း (စွမ်တောင်း) စေတီတော်မြတ်ကြီးအား ကျိုင်းယင်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ထံဆက်ကပ်ပြီး လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ကြသည်။ ၎င်းနောက် အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသည့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများက ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များအား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများအသီးသီး ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ကြသည်။ ယင်းနောက်စွမ်းခမ်း ကျောင်းတိုက်မှ အရှင်ပရိယတ္တိဓါရီက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့် စွမ်းခမ်းစေတီတော်မြတ်ကြီး ပုံတူအား ပေးအပ်သည်။
၎င်းနောက် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နယကအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ လွိုင်လင်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တပညာနန္ဒထံမှ အနုမောဒနာတရားနာယူ၍ လှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် ရေစက် သွန်းချ အမျှပေးဝေ ကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်သံဃာတော်များက စွမ်ခမ်း (စွမ်တောင်း) စေတီတော် မြတ်ကြီးအား ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင်၍ ဗုဒ္ဓါဘိသိက်သွန်းတော်မူကြသည်။ ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ရတနာရွှေမိုး ငွေမိုးများရွာသွန်း ဖြိုးကြပြီး စေတီတော်မြတ်ကြီးရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အား မြသပိတ်ဆွမ်းတော်၊ သစ်သီးပန်းမန်နှင့် သောက်တော်ရေချမ်းများ ကပ်လှူပူဇော်သည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နှင့်ဇနီး၊ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆရာတော်သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြသည်။
ထို့နောက်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စေတီတော်ကြီးအား ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူ ဇော်ခဲ့မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများအား ကြည့်ရှုကြသည်။
အဆိုပါစွမ်ခန်း (စွမ်တောင်း) စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် ကျိုင်းတုံမြို့၏ ကျက်သရေဆောင် စေတီတော်ကြီးဖြစ်ပြီး သာသနာသက္ကရာဇ် ၁၅၇ ခုနှစ်ခန့်တွင် တည်ထားခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် စေတီတော်မြတ်ကြီး ဖြစ်ပြီး ကောဇာသက္ကရာဇ် ၈၅၃ ခုနှစ်တွင် စွန်ဆန် စေတီတော်ကြီးသည် ဥတုသုံးပါးဒဏ်ကြောင့် ပြိုလဲခဲ့သည်။ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၈၇၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ညအချိန်တွင် စေတီတော်မှ ရောင်ခြည်တော်လွှတ် ထွက်သဖြင့် တစ်မြို့လုံးထိန်လင်းခဲ့ပြီး ဆရာတော် (ဗုဒ္ဓရတ္တမထေရ်) နှင့် ကျိုင်းတုံစော်ဘွား (အတိတျရာဇာ) အမည်ရှိသော စော်ဘွားကြီးတို့က ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့ပြီး ထီးတော်ကိုရွှေဖြင့် ကွပ်၍တင်ထားခြင်းကြောင့် စွမ်ခမ်း စေတီတော်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကောဇာသက္ကရာဇ် ၈၈၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အရုဏ်တက်ချိန်တွင် ရောင်ခြည်တော်များ ထပ်မံလွှတ်သဖြင့် တစ်မြို့လုံးလင်းထိန်စေခဲ့ပြီး စွမ်ဝိုးရွာသူဌေးကြီး သမီးနန်းသုဂန္ဒရကေသာက ပြန်လည် မွမ်းမံတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ထီးတော်ကိုကြေးဖြင့် ကွပ်၍တင်ထားခြင်းကြောင့် စွမ်တောင်းစေတီဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် အလှူရှင်များ စုပေါင်းလှူဒါန်းသည့် ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပန်ကွဲကျေးရွာအနီးရှိ အဘယရာဇမုနိ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး တည်ဆောက်ပြီးစီး
တပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် အလှူရှင်များ စုပေါင်းလှူဒါန်းသည့် ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပန်ကွဲကျေးရွာအနီးရှိ အဘယရာဇမုနိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကို တွေ့ရစဉ်။
ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပန်ကွဲကျေးရွာအနီးရှိ အဘယရာဇမုနိ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအား တပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် အလှူရှင်များ စုပေါင်း၍ ရင်ပြင်အကျယ် အလျား ၁၅၀ ပေ၊ အနံ ၁၈၀ ပေ၊ ပလ္လင်တော်အလျား ၄၅ ပေ၊ အနံ ၆၃ ပေ၊ ဉာဏ်တော် အမြင့် ၇၂ ပေရှိပြီး မြတ်စွာဘုရား၏ ၃၂ ပါးသော လက္ခဏာတော်ကြီး လက္ခဏာတော်ငယ်တို့နှင့်အညီ သပ္ပါယ်ကြည်ညိုဘွယ်ရာ ကိုးကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘလ ၆ ရက် တွင်စတင် တည်ထားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အဘယရာဇမုနိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် မြတ်ကြီးသည် ယခုအခါရာနှုန်းပြည့်ပြီး စီးပြီဖြစ်ပြီး ယခုလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မူလဌာပနာတော်၊ အလယ်ဌာပနာတော်နှင့် အထက် ဌာပနာတော်သွင်းနှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
General Maung Maung Kyaw gives sports gear to an official.
Senior General Min Aung Hlaing presents fifi ction and non-fifi ction books and publication to an official.
Ashin Pariyattidhari of the Swankham Monastery presents picture of Swamkham (Swamtawng) Pagoda to Senior General Min Aung Hlaing.
Senior General Min Aung Hlaing and party offer alms to members of the Sangha.
Admiral Tin Aung San and wife offer donations of families of Tatmadaw
(Army,Navy and Air).
A ceremony to mark successful completion of offering gold foils at the whole Swamkham (Swamtawng) Pagoda took place at the pagoda in Kengtung of eastern Shan State in conjunction with the consecration ceremony this morning, attended by Abbot of Kengyin Monastery Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja Bhaddanta Khemacara and members of the Sangha, Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing and wife Daw Kyu Kyu Hla, Commanderin- Chief (Navy) Admiral Tin Aung San, Commander-in-Chief (Air) General Maung Maung Kyaw, senior military offi cers of the Office of the Commander-in-Chief (Army), the commander of Triangle Region Command, departmental offi cials, well-wishers and guests.
The Senior General and congregation took the Five Precepts from Abbot of Kengyin Monastery Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja Bhaddanta Khemacara and Parittas recited by members of the Sangha.
The Senior General and wife donated Swamkham (Swamtawng) Pagoda dedicating to the Lord Buddha to the Abbot of Kengyin Monastery and offered alms. Senior military officers donated alms to members of the Sangha. Ashin Pariyattidhari of the Swamkham Monastery presentedacertifi cate of honour andapicture of Swamkham Pagoda to the Senior General.
Members of the Sangha concreted Swamkham (Swamtawng) Pagoda. After performing the rituals of golden and silver showers in commemoration of the successful completion, the Senior General and wife offered alms in emerald alms-bowl, fruits, fl owers and water to the Buddha image at the pagoda. Then, the Senior General, wife and party offered day alms to members of the Sangha. The Senior General and party viewed documentary photos on offering gold foils to the pagoda.
The ancient Swamkham (Swamtawng) Pagoda, prestige of Kengtung, was built in 157 Sasana Era. The pagoda fell down in bad impacts of weather in 853 Myanmar Era.As rays from the pagoda covered the whole Kengtung at night of full moon day of Thadingyut in 871 Myanmar Era, the Abbot (Buddharattama Mahathera) and Kengtung Chieftain (Atitraraja) renovated the pagoda for the second time and hoisted the umbrella decorated with gold at its brim. So the pagoda was called Swamkham Pagoda. As the pagoda spread the rays again at dawn on full moon day of Thadingyut in 881 Myanmar Era, the whole Kengtung was illuminated. Nang Sugandarakesa, daughter of the rich man from Swamwoe Village, renovated and built the pagoda and decorated the brim of umbrella with bronze.
Hence, the title of the pagoda was changed Swamtawng Pagoda. Moreover, rays from the pagoda brightly shined on full moon day of Thadingyut in 1259 Myammar Era. As the pagoda collapsed in earthquake of Kengtung in 1266 Myanmar Era and it was rebuilt for the fourth time in 1296 Myanmar Era. Kengtung Chieftain Chetaraparamarepanda, members of the Sangha and local people of Kengtung renovated the pagoda for the fi fth time in 1313 Myanmar Era. They hoistedagold umbrella. And it was renamed Swamkham Pagoda. In 1988, members of the Sangha led by Abbot of Kengngam Monastery Pakhuwakyauk Bhaddanta Thitapanna and Abbot of Swamkham Monastery Pakhuwayinun and well-wishers offered gold foils to the pagoda for the fi rst time.
Members of the Sangha led by the Abbot of Kengyin Monastery, the Abbot of Swamkham Monastery and the Abbot of Naga Hnakaung Monastery, Tatmadaw families led by Commander of
Triangle Region Command Maj-Gen Min Aung Hlaing and wife Daw Kyu Kyu Hla and well-wishers of Kengtung collectively offered gold foils to the pagoda for the second time in 2005. Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing and wife Daw Kyu Kyu Hla, families of the Tatmadaw (Army, Navy and Air) and wellwishers from Kengtung collectively donated gold foils to the pagoda for the third time in 2012. This year, gold foils on bronze plates were offered to the pagoda for the fourth time.